Jul 21, 2021 06:04 PM Merolagani
बेजोस र ‘बार रेजर्स’ ले रोजगारी आवेदकहरुका लागि नयाँ स्ट्याण्डर्ड निर्धारण गरे
यदि तपाईलाई व्यवसायिकलाई भर्ति गर्नु महंगो लाग्छ भने सिकारुलाई लिनु भर्ति नगरेसम्म कुर्नुहोस्।
एक उत्पादन एसेम्बल गर्न १० जना चाहिन्छ? जति ढिलो काम गर्ने मान्छे भयो त्यति नै धेरै मान्छे चाहिने हुन्छ।
विवरणमा ध्यान दिनुपर्छ? कम ध्यान दिने मानिसहरुले गरेको गल्तीहरुले तपाईलाई तल तानिरहन्छ।
बार रेजर्स त्यस्ता मुठ्ठीभरका मानिसहरुको समूह हुन् जसले एमेजनभित्र जसले उच्च स्ट्याण्डर भएका मानिस र विशेष तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई भर्ना गर्ने सफल परीक्षण गरिसकेको छ। अन्तरवार्ताको प्रक्रियामा, त्यहाँ कम्तिमा पनि एक बार रेजर्स उपस्थित हुन्छ। बार रेजर्सहरुसँग त्यस्तो शक्ति हुन्छ जसलाई कसैले दबाउन सक्दैन। बार रेजर्सको अनुमति बिना एमेजनले कसैले भर्ति गरेको छैन।
कसैलाई भर्ना गर्नुअघि यी तीन प्रश्नहरु आफैलाई सोध्नुहोस्
के म यस व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्न सक्छु?
के यस व्यक्तिले समूह प्रभावकारिताको औषत स्तरलाई उठाउन सक्छ?
कुन कोणबाट यो मानिस सुपरस्टार बन्न सक्छ?
एमेजनको तरिकाबाट अन्तरवार्ता लिने
एमेजनका अन्तरवार्ता व्यवहार आधारित प्रश्नहरुमा निहित हुन्छन्, जुन अघिल्ला र उम्मेद्वारहरुले आगामी दिनमा अगाडि आउन सक्ने चुनौतीहरुको बारेमा हुन्छन् जसलाई नेतृत्व सिद्धान्तको प्रयोग गरी कसरी सम्हाल्न सक्छन् भन्नेमा निहित हुन्छ।
एमेजन ब्रेन टिजरहरुलाई वास्ता गर्दैनथे किनभने जब कम्पनीमा उम्मेद्वारको सफलता अनुमान गर्ने बेला हुन्थ्यो, बेजोसलाई अविश्वासिलो लाग्थ्यो। यहाँ व्यवहारमा आधारित केही प्रश्नहरु दिइएका छन्ः
मलाई त्यो समयको बारे बताउनुस् जब तपाई विभिन्न सम्भावित समाधान भएको समस्या सामना गर्नुभएको थियो। त्यो समस्या के थियो र तपाईले कसरी त्यसलाई समाधान गर्नुभयो? र त्यो छनोटको नतिजा कस्तो भयो?
तपाईले कहिले जोखिम लिनुभयो, गल्ती गर्नुभयो अथवा असफल हुनुभयो? तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुभयो र त्यस अनुभवबाट तपाई कसरी विकास गर्नुभयो?
प्रोजेक्टको नेतृत्व गर्नुभएको समयको वर्णन गर्नुहोस्।
समूहलाई प्रोत्साहन गर्न अथवा प्रोजेक्टमा कोलाबोरेशनलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्दा तपाईले के गर्नुभयो?
रणनीति विकास गर्न तपाईले तथ्याङ्कलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो? (याद राख्नुस् एमेजन एक डाटा केन्द्रित कम्पनी हो)
बेजोस संख्याको अर्थ निकाल्नका लागि कथाहरु प्रयोग गर्छन्।
धेरै व्यवसायहरुले डाटा र एनालाइटिक्सलाई आफ्नो व्यवसायमा के हुँदैछ भनेर भ्रममा पार्न दिन्छ। उनीहरुले मापन गरिरहेको तथ्याङ्क सही हुन सक्छ तर यदी उनीहरु गलत कुरालाई मापन गरिरहेका छन् भने, यो गलत तथ्याङ्कमा काम गरे बराबर नै हुन्छ।
ए/बी परीक्षण कुन परिवर्तनले उपभोक्ता व्यवहारमा सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने निर्धारण गर्ने एक स्ट्याण्डर्ड तरिका हो। यसले परीक्षणको विषयलाई दुई समूहमा विभाजित गर्दछ, एक विकल्प एउटा समूहलाई दिनुहोस् र अर्को विकल्प अर्को समूहलाई, त्यसपछि कुन विकल्पले राम्रोसँग काम गर्छ हेर्नुहोस्।
बेजोस आफ्ना वित्तीय प्रदर्शनको मापन प्रतिशेयर ‘फ्रि क्यासफ्लो’ बाट गर्थे
अधिकांश सार्वजनिक रुपमा कारोबार भइरहेका कम्पनीहरु आम्दानी, प्रतिशेयर आम्दानी र आम्दानी वृद्धिदरमा केन्द्रित हुन्छन्। बेजोस होइन। फ्रि क्यासफ्लो भनेको कम्पनीले भाडा, आवश्यक उपकरण, प्रविधि अपग्रेड जस्ता दैनिक सञ्चालनका लागि चाहिने निश्चित खर्चहरु गरिसकेपछि बाँकी भएको पैसा हो। बेजोसको शब्दमाः
‘मानिसहरु अहिले पनि हामीलाई ९० सेन्टमा डलर बिल बिक्री गरेको आरोप लगाए र भने, हेर, जो कोहिले पनि त्यसो गर्न र आम्दानी बढाउन सक्छ। हामी त्यस्तो गरिरहेका छैनौँ। हामी जहिले नाफामा छौँ। यो फिक्स्ड कस्ट बिजनेस हो। र त्यसो भएमा मैले आन्तरिक मेट्रिक्सबाट के देख्न सक्दछु कि एक निश्चित भोल्यूम स्तरमा हामी हाम्रो निश्चित लागतहरु भरपाई गर्न सक्छौँ र कम्पनी लाभदायक हुन्छ।’